Maonero ako anoverengeka: Maonero nezve Debian | Kubva kuLinux
Maonero ako anoverengeka: Maonero nezveDebian
Isu tinodzokera kumutoro nechikamu. Maonero ako ndiwo anokosha, ino nguva neemail yemushandisi inonzi naPerseus.
1 Perseus anotiudza:
2 Kubva Linux inopindura:
Kwazisai nhengo dzose dze KubvaLinux, Ndinokukorokotedzai ngeblog (nderimwe rezvandinofarira ;-)) panguva ino ndinoda kuziva mafungiro ako nezvazvo.
Ini ndashandisa archlinux, PcLinuxOs y LMDE (distros yandinoziva kuti iri kuburitsa kuburitswa kana kufanana neiyi pfungwa), mubvunzo wangu ndewokuti ndeupi weaya matatu distros akafanana zvakanyanya nedebian? Handina kumbobvira ndambozviedza kuti ive 'yechinyakare asi Yakatsiga' (Ini ndakaba uyu mutsara kubva kune burjans: P).
Ini ndinoda rollings senge arch, sezvo ini ndichida kuziva kuti ini ndinogona kunge ndakagadzirisa mapakeji uye handifanire kumirira kwenguva yakareba kuti ivo vabatanidzwe mune yavo software zvinyorwa kana kuti ivo vabude mune inotevera kuburitswa (sePCLinuxOS).
Kana iwe uchikwanisa kuwedzera uyu musoro wenyaya mberi (maitiro ekuiisa, chii uye mangani marudzi emhando dzeshanduro dziripo pamwe nekusiyana kwavo, nharaunda yedesktop, data rehunyanzvi, nezvimwewo), zvichionekwa zvakajeka kubva pane zvavo zviitiko, zvingave zvakanaka. Ndiani anoziva, pamwe ini ndoda kuzviedza kamwechete uye zvachose ;-).
Kubva Linux inopindura:
Chokutanga pane zvose ndinokutendai zvikuru nemashoko enyu ne Kubva linux.
Zvinonzwisisika, pane chimwe chinhu chaunoratidzika kunge wakaregeredza: Kana iwe wakashandisa Debian : D. Kana naizvo zvaunotiudza iwe waishandisa LMDE (Linux Mint Debian Shanduro) Zvakanaka, iwe unotova nazvo ipapo. Tinokuyeuchidza izvozvo LMDE ndiyo vhezheni ye Linux mint iyo yakavakirwa pa Debian Squeeze / Kuedza.
Nezve iyo Burjans phrase ini ndinogona chete kukuudza iwe kuti pane chikamu uye chikamu. Izvo zvese zvinoenderana nekuti iwe unosvika sei parizvino iwe waunoda kuve. Debian rine bazi Yakasimba (zvinova ndizvo zvandinofungidzira burjans zvinoreva), iro bazi Testing nebazi Sid. Unogona kuverenga zvakawanda nezve izvi pano.
Mune yangu kesi ini ndinoshandisa Testing, uye ini ndine yazvino (yakagadzikana) shanduro dzemapakeji mazhinji, semuenzaniso:
Zvino, ichokwadi kuti kana vhezheni ye Debian mwanakomana Kutenderera Kuburitswa vangave sei archlinux o PC Linux OS.
Ehe tinogona kugadzirisa nyaya iyi zvishoma zvakadzama, uye kana uchida, unogona kurodha pasi PDF nezve kuisirwa kwayo iwe kwaunogona kuwana mukati Iyi chinyorwa. Muchirongwa ichi unogona kuona maitiro ekuisa debian-kusvina (ikozvino Stable bazi) uye maitiro ekugadzirisa zvimwe zvirevo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » Maonero ako anoverengeka: Maonero nezveDebian
Ndiri kuona kuti Perseus haana kuba chirevo chose kubva kuchinyorwa:
Izvo zvinopfuura pachena kuti ivo veDebian vakomana vanoda kusiya kumashure kweiyo diki 'yechinyakare asi Yakagadzikana' chiratidzo, kuti iite 'Kusvika parizvino uye Yakagadzikana'.
Pindura kune burjans
Don't Ini handizive zvauri kutaura nezvazvo uye nenzira muRAE yauri kuita asi hauna .. Kana kuti ini handizive kushandisa duramazwi. 😕
"Ane" ndiko "kuva"; uye "ita" ndiko "kuita."
Uye pane iyo nyaya, chokwadi chinonetsa kunyunyuta pamusoro paDebian kana iwe uchinge wajekesa nezve mutsauko pakati pe "solid", "kuyedza" uye "sid". Izvo zvinoita kuti isu tisiri-komputa masayendisiti anotambura, hapana mubvunzo, asi ivo mentholates vari kuita basa rakakura kuLMDE, zvichiita kuti zvinhu zvive nyore kwatiri.
Mushure mekushinga kwaedza kundiruramisa, ndanga ndisina chokwadi (ndinogona kutadza, ndiri munhu wenyama). Ini handisi nyanzvi mumutauro wechiSpanish saka ndakatanga kutarisa, kunyangwe mumapeji andinowana, hapana chandakawana. Ndakaverenga pamusoro kuti "danda" re "ita" rinoshandiswa mune zvakakosha, semuenzaniso: Ita izvi ndinozvitumira kwauri kugehena! 😀 Zvino Gumi nematatu, mune iyo chinyorwa Chiri sei? "" "Kana" zvaitwa "zvinoshandiswa here?
Ndinoziva, mudzidzisi wechiSpanish akanditsanangurira. Ushingi hwaive hwechokwadi ¬¬
Muchinyorwa chinofanira kuti, "iwe wakatozviita" sezvazvinoreva "kuita" kuita chimwe chinhu. Sezano, "danda" rinogona kugara richitsiviwa ne "inoita" pachinzvimbo che "rine", harigone kutsiviwa.
Semuenzaniso, mune chirevo chako haugone kutsiva "ita" sezvaingaverenga: "yatove 'inoita' yaitwa", izvo zvisina zvazvinoreva.
Kune rimwe divi, kana iwe ukati: "Ita basa rako rechikoro", saka kana uchigona kutsiva "ita basa rako rechikoro."
Kutenda nemakirasi, mudzidzisi wechiSpanish akatsanangura zvakafanana kwandiri hahaha ..
[Memo kwandiri: Unofanira kudzidza zvakawanda .. zvikuru ...]
Chinhu chega chandingataure nezveDebian ndechekuti kuti shitty 3-pair distro uye kuti ini ndinosarudza chiuru nguva kuti ndishandise Hasefroch yakashatirwa kubhawa yeiyo shitty Debian yemabhora, ini handitozive kuti iro rakavhurika sosi Hasefroch achiri mupenyu sei
Ini handina kumuda nekuda kwekusashivirira kwake mapakeji nechishoma zvakanyorwa zvisina basa, dai zvisiri izvo ndingadai ndakagara naye kwechinguva.
Kune vamwe vese panguva iyoyo handina kuuya nematambudziko ekugadzikana uye kumhanya kwanga kwakanaka
Kune sevha zvinoita kunge zano rakanaka kwazvo, sezvo inogona BSD kana Slackware.
Kwatiri kuti tinzwisisane, Debian akafanana neblonde uye Arch akafanana nebrunette, vandinoda
Dai Debian anga akafanana neBlonde, ini ndaisazoshandisa nekuti ini ndoda brunettes. Kana iwe uchigona ndapota tsanangura izvi:
Ah, ndeyekuti ndeye 100% yemahara, iwe haudi chero chinhu nekadiki kunyoreswa
Zvakanaka, Debian ane ruremekedzo rwangu rwese, uye nekuwedzera kana vakaedza kuve vese vakagadzikana (sezvo bazi rakatsiga rave richigara), uye rakagadziridzwa. Ndichiri kuishandisa ndaingova nedambudziko rimwe chete uye raive nebazi risina kugadzikana, ndosaka ndichigara ndichiti debian kusagadzikana hakuna kunyatsogadzikana. Asi hei, chero munhu anokanganisa nechimwe chinhu kuyedza kana kusagadzikana, anofanirwa kuziva zvekutarisira kana kutarisira kutarisira kukundikana pane imwe nguva.
Kune mamwe ese akasimba semuti wemuouki uye mushure meArch, Debian. (Ini ndinoda gentoo, asi mune quilombo sekutaura kwevaArgentina)
Chii chekuita kuti Zarafa isakwanise kuendesa maemail muZentyal?
Qt Project: pakupedzisira Qt yakasununguka zvachose uye nharaunda